Amakhukhi - Amakhukhi | Apg29
Apg29 isebenzisa amakhukhi.
Ngu ezingosini ze-apg29 futhi usebenzise izici zayo, uyavumelana nokusetshenziswa kwamakhukhi.
Apg29 isebenzisa amakhukhi. Amakhukhi isiSwidi. Kuyinto ikhasi ukusebenza kahle futhi ngomuzwa ongcono.
Phakathi kwezinye izinto, amakhukhi ngesimo amazwana kuwe endaweni ukuze bakwazi ukulondoloza igama lakho kanye e-mail ukuze ungenawo uligcwalise ngaso sonke isikhathi uma ubhale amazwana. Ikheli lakho kanye negama (noma igama lomsebenzisi) lilondolozwe database ukuthi ngokusobala akukhulumeli emphakathini. Amakhukhi zisetshenziselwa izibalo ze-Google.
Amakhukhi files amancane agcinwe kwasendaweni kukhompyutha yakho. Akusona ikhekhe nawe ungadla. ;) Ungasetha isiphequluli sakho ukuthi ufuna la mafayela ukusebenza, noma ngabe ufuna noma cha. Vala ngokuphelele ithuluzi njengoba kunengozi ukuthi ikhasi ayisebenzi njengoba kuhlosiwe.
UMthetho ku -Electronic Communications washintsha 1 Julayi 2011 Onyakeni owawandulele uhulumeni eze isiphakamiso ukuthi idatha kungenziwa kuphela ukubuyiswa kusuka futhi agcinwe imishini esibulalayo nge ngemvume yomsebenzisi - kakade, kumele abasebenzisi unolwazi mayelana nenjongo amakhukhi.
Ngaphambi kokuba ngokwanele impela nje wazise abathengi kwalolo lwazi noma kuqoqwa noma egcinwe kukhompyutha yabo - nomthetho ikhukhi, namanje ukuba Isahluko 6. § 18, akwanele ukuba nje wazise abathengi, manje abathengi futhi uyavuma ukuthi ulwazi ukubuyiswa kusuka noma egcinwe kumadivayisi abo. Ikhukhi Umthetho lwenzelwe ukuqwashisa ukuthi agcinwe kukhompuyutha komuntu.
Ungachofoza off umfanekiso wemininingwane ngezansi mayelana namakhukhi, chofoza "Ngiyaqonda" futhi siqhubeke ezingosini ze-apg29.
Ngicela ningithinte uma unemibuzo kule noma ukubhala in the imibono ngezansi.
Siyabonga ngokuvakashela indawo blog Apg29.Nu wena!